आज माओवादी केन्द्रको नयाँ नेतृत्व चयनः अध्यक्षमा प्रचण्ड सर्वसम्मत, कुन पदमा क–कसको दाबी ? | Nepal Ghatana
आज माओवादी केन्द्रको नयाँ नेतृत्व चयनः अध्यक्षमा प्रचण्ड सर्वसम्मत, कुन पदमा क–कसको दाबी ?
प्रकाशित : १७ पुष २०७८, शनिबार ०९:१२
नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन शनिवार नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ ।
शनिबार ११ बजे सुरु हुने बन्दसत्रमा स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले विधान संशोधन प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम छ । त्यसपछि विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर निर्वाचन प्रक्रियामा जाने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । माओवादीले सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्न लागेको छ ।
माओवादीले बहुपदीय अवधारणा अगाडि सारेको छ । सोही अवधारणाका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरेको छ । हालसम्म अन्य नेताले अध्यक्षमा दावी नगरेकाले अध्यक्षमा प्रचण्ड नै दोहोरिने पक्कापक्की छ । यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठको बलियो सम्भावना छ । महासचिवमा पनि विभिन्न नेताहरूले दावी गरेका छन् । यस्तै, दुई उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसमेतमा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र मिलाएर निर्वाचन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
विधान पारित भएपछि निर्वाचनको काम अगाडि बढ्ने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगका प्रमुख विष्णुपुकार श्रेष्ठका अनुसार विधान पारित भएपछि निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । पुस ११ देखि राजधानीमा सुरु भएको माओवादीको महाधिवेशन शनिबार नै सम्पन्न गर्ने तयारी छ ।